IXiaomi Mi Max 2 ngoku isemthethweni kwaye yongeza i-5.300mAh yebhetri | Iindaba zeGajethi
IXiaomi Mi Max 2 ngoku isemthethweni kwaye yongeza i-5.300mAh yebhetri
Sele sibhengeze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukuba ukuboniswa kwesi sixhobo kwakungomhla we-25 kaMeyi. Kule meko, sijamelene nemodeli entsha evela kwinkampani yaseTshayina eyi-typecast ngaphakathi kwebala le-phablet yesikrini sayo esikhulu se-6,4-intshi FHD. Kule meko elinye lamanqaku ekufuneka liwathathele ingqalelo esi sixhobo seXiaomi yile ibhetri yayo iyamangalisa ngokwenene nge-5.300 mAh yayo Bakwazile ukongeza, ngokuyinxenye kubulela kubungakanani beMi Max uqobo. Kwelinye icala, uyilo lweXiaomi sele siyazi ukuba zilungile kwaye kule meko ayidanisi.
Le modeli intsha yongeza ukucaciswa kweMiami Mi 6, njengekhamera yayo eyongeza inzwa ye-Sony IMX386 kunye notshintsho oluncinci xa kuthelekiswa nemodeli yokuqala kunye neXiaomi Mi Max. Ukongeza kwiscreen se-IPS se-6,4-intshi, ine-processor yeQualcomm Snapdragon 625, i-4 GB ye-RAM, iindlela ezimbini ezikhoyo ze-64 okanye i-128 GB yokugcina, ikhamera ye-12 mp esiyikhankanyile ngasentla kunye nomtsalane. I-5.300 mAh ibhetri ngentlawulo ekhawulezayo ifakiwe. Ngamafutshane, ukuba sidibanisa kuyilo olufana kakhulu ne-Apple ye-Apple (enayo) kunye nexabiso eliphantsi, sinokudibana okufanelekileyo kwabaninzi.
I-phablet eya kwintengiso e-China olandelayo ku-Juni 1 Inexabiso eliphantsi ngokwenene ukuba sigxila kumgangatho kunye nokubalulwa kwayo, utshintsho luya kubiza ezimbalwa I-220 ye-euro yemodeli ye-64 GBngexesha I-128 GB inye ixabisa malunga ne-260 euro. Ngokusengqiqweni kutshintsho olwenziwe ngokuthe ngqo, ukuba songeza ukuba ezi zixhobo ziya kuthengiswa nge-e-commerce, kuya kuba yimfuneko ukunyusa ixabiso lokugqibela kancinci, nokuba kunjalo ke sijamelene namaxabiso aphambeneyo njengoko kuhlala kusenzeka ngeXiaomi ngokwemigangatho ixabiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IXiaomi Mi Max 2 ngoku isemthethweni kwaye yongeza i-5.300mAh yebhetri
Andiqondi ukuba bajongana njani nokukopa ngokungacacanga i-iPhone (nditsho imigca yee-eriyali ze-iPhone 7)
I-Chuwi Surbook, i-Surface clone etshayela i-IndieGoGo